steemit – Page2– @mmunited
ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူ − ၃
Today I will write this post using burmese language. ဒီစိတ်ကူးကို ကိုမင်းစိုးနိုင်ရဲ့ ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီးရလာတာပါ။ ကို @minsoenaing ရဲ့ ပိုစ့်ကို အောက်ကလင့်ခ် ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ MSC Review နှင့် Steemit တွင်စာရေးနည်း Image Source စာရေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်အားသန်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ရေးကြတာပါပဲ။ ဒီအတွက်ကိုတော့ အပြစ်မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ Steemit မှာစာရေးတာကို ပိုက်ဆံအတွက် သက်သက်ရေးတာကိုတော့ မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အဲ့ဒိလိုလုပ်ရင် အရမ်းပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ဝါသနာ ပါတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်မှ အောင်မြင်မှာပါ။ ကိုယ်ရေးတဲ့ပိုစ့်တစ်ခုကို ကိုယ့်ဘာသာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ငါ စာဖတ်သူကို ဘာပေးချင်တာလဲ။ ရသ တစ်ခုခုလား ဒါမှမဟုတ် သတင်းအချက်အလက် …
My Entry for CONTEST: 150 STEEM – “PROMOting STEEM” – GO4IT!
How @Steempress can make Steem go to the moon? This is the question I would like to answer and would like to writeapost about it. What are the problems currently Steem blockchain is facing. There are two main problems that Steem is facing. Lack of content creators Lack of support for that creators There …